BQ manavao ny eReader ary mandefa ny BQ Cervantes 4 | Ireo mpamaky rehetra
Joaquin Garcia | | BQ, mpamaky
Ny orinasa Espaniola BQ dia manohy miloka amin'ny eReaders. Na eo aza ny zava-misy fa mifantoka amin'ny fandefasana finday avo lenta vaovao ny orinasa dia nanana elanelam-potoana io mandefa maodely eReader vaovao, maodely na fanavaozana kokoa. Ity fitaovana ity dia nantsoina hoe Cervantes 4, nanolo ny Cervantes 3, izay, amin'izao fotoana izao, dia mbola zaraina ihany.
Ity fitaovana vaovao ity dia tsy mitondra fisehoana manaitra toa ny Kobo Aura One na Kindle Oasis, fa manolotra izay tadiavin'ny mpamaky rehetra. Ho an'ny zavatra iray, ny efijery eReader dia nohavaozina ho fampisehoana miaraka amin'ny haitao E-Ink vahaolana feno, ity dia 1072 x 1448 teboka ary 300 ppi. Fanapahan-kevitra izay ny eReaders premium ihany no manana. Ny fandrefesana azy dia antonony ary manana jiro eo anoloana izay azo ahitsy mba hialana amin'ny jiro manga, ho an'ireo mpamaky indrindra amin'ny alina.
Cervantes 4 dia mifanaraka amin'ny tahan'ny fisaka Nubico ary manolotra ny fahafaha-mampitombo ny fitehirizana ao anatiny amin'ny alàlan'ny slot ho an'ny karatra microsd, zavatra izay nesorin'ny maodelin'ny eReaders maro.
Mikasika ny refy sy ny lanjany, ny vaovao Cervantes 4 milanja 185 gr ary manana ireto refy manaraka ireto: 169 x 116 x 9,5 mm. Tena fepetra mahaliana ho an'ny ankamaroan'ny mpamaky izy ireo, farafaharatsiny amin'ny lanjany, zavatra izay itarainan'ny mpamaky maro sy tadiaviny amin'ny eReader tsara.
Ny fizakantenan'ny Cervantes 4 dia avo dia avo, mihoatra ny volana fizakan-tena, miaraka amin'ny bateria 1.500 mAh. Mazava ho azy, ny fahaleovan-tena dia ho bebe kokoa na miankina amin'ny fampiasana omentsika ny fitaovana ary koa ny modely wifi sy ny jiro eo alohany.
Mikasika ny fepetra arahana ara-teknika, Ny Cervantes 4 dia manana processeur 6 Ghz Freescale i.MX 1,2 miaraka amin'ny ondrilahy 512 Mb sy fitehirizana anatiny 8 Gb. Izy io dia manana fifandraisana Wi-Fi, efijery mikasika ary jiro eo aloha. Ny haitao ampiasain'ny BQ dia antsoina hoe OptimaLight, teknolojia fanaovan-jiro izay mamela ny famoahana ny hazavana mandra-pandràvany tanteraka ny jiro manga ary manolotra an'io efijery volomboasary mahazatra an'ireo fitaovana ireo.
Ny vidin'ity Cervantes 4 ity dia 139 euro, lafo kokoa noho ny fitaovana 6-inch hafa, saingy takatry ny saina rehefa mitondra entana miaraka amin'ny jiro manga, lanja na vidin'ny ebook ianao. Zavatra iray izay manana eReaders premium ihany.
Ho ahy manokana dia hitako fa eReader mahaliana, tena mahaliana raha jerentsika ny asan'ilay teo alohany, Cervantes 3 ary amin'izao fotoana izao dia tsy misy zavatra manamarina fa tsy vita io. Izany hoe, heveriko fa manana eReader premium isika miaraka amina vidiny antonony na toa mbola tsy nandalo ny fitsapana isika, fa Ahoana ny hevitrao momba ilay fitaovana BQ vaovao? Heverinao ve fa mahaliana ity Cervantes 4 vaovao ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » Hardware » mpamaky » BQ manavao ny eReader ary mandefa ny BQ Cervantes 4
Eny, priori dia toa fitaovana manintona izy io. Ny lohahevitr'ilay hazavana "alina" heveriko fa hevitra tsara ary manontany tena aho hoe mandra-pahoviana no hahalalan'i Amazon azy ho an'ny Kindles-ny. Ny tena marina dia tsy mbola nanana BQ teny an-tanako aho fa mitadidy fahatsiarovana ilay mpamaky voalohany, Papyre 5.1 iray. Tsara ny mahita fa misy fiainana ankoatran'i Kobo sy Kindle.
Ny fanontaniako dia: aiza no hividianako azy?
Mahagaga fa toa tsy misy io na aiza na aiza.
Izany hoe, mbola misy fiainana kely mihoatra an'i Kobo sy Kindle.